Mpifandanjana ny fampitoviana simika
Database an'ny fanehoan-kevitra simika 10000 - fitaovana simia - fampahalalana momba ny akora
Te hikaroka fampitahana ivelan'ny Internet, andramo ny fampiharana finday anay
Mikaroha ao amin'ny Android na Iphone App Store ho an'ny fampiharana Chemical Equation Balancer miaraka amin'ity logo ity
Fanombanana fahaiza-manao fandaharana
Famaritana fototra amin'ny simia
Inona no atao hoe fampitoviana simika?
Ny Equation Chemical dia endrika iray mamaritra ny fanehoan-kevitra simika izay ny anaran'ireo zavatra simika tsirairay dia hosoloina simban'ny simika.
Ao amin'ny Equation Chemical, ny làlan'ny zana-tsipìka dia maneho ny lalana ahitàna ny fihetsika iray. Ho an'ny fanehoan-kevitra tokana dia hasehontsika amin'ny zana-tsipika miankavia sy miankavanana. Ka ireo zavatra eo ankavia dia ho tafiditra ao, ary ny eo ankavanana dia ny vokatra.
Famaritana mizana mifandanja
Ny fampitoviana voalanjalanja dia fampitoviana valin'ny simika izay mitovy ny habetsaky ny isa sy ny isan'ny atôma ho an'ny singa tsirairay ao amin'ilay fihetsika ho an'ny reactants sy ny singa. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia mitovy ny faobe sy ny lanja amin'ny lafiny roa amin'ny fihetsika.
Ohatra amin'ny fampitoviana tsy mahay mandanjalanja sy mahay mandanjalanja
Ny reactants sy ny vokatra azo avy amin'ny fiota simika dia voatanisa ao anaty fitoviana simika tsy mahay mandanjalanja, fa ny habetsahana ilaina hanatanterahana ny fitehirizana faobe dia tsy voalaza. Ity fampitoviana ity, ohatra, dia tsy mahay mandanjalanja amin'ny resaka faobe ho an'ny fihetsika eo amin'ny vy oksida sy ny karbaona hamorona vy sy gazy karbonika:
Koa satria tsy misy ion eo amin'ny lafiny roa amin'ny fampitahana, mandanjalanja ny fiampangana (fiampangana tsy miandany).
Ao amin'ny ampahan'ny reactants (amin'ny ankavanan'ny zana-tsipìka) dia misy atôma vy roa, fa iray monja amin'ny lafin'ny vokatra (ankavanan'ny zana-tsipìka). Azonao atao ny milaza fa tsy voalanjalanja ny fitoviana na dia tsy manisa ny habetsaky ny ataoma hafa aza ianao.
Amin'ny lafiny havia sy havanana amin'ny zana-tsipìka, ny tanjon'ny fandanjana ny fampitoviana dia ny hahazoana ny isa mitovy amin'ny karazana atoma tsirairay. Izany dia tanterahina amin'ny alàlan'ny fanovana ireo coefficients fitambarana (isa napetraka eo alohan'ny raikipohy fitambarana). Ny sora-piankohonana (isa kely eo ankavanan'ny atoma sasany, toy ny vy sy oksizena amin'ity tranga ity) dia tsy miova mihitsy.
Ny fampitahana mifandanja dia:
Inona no atao hoe zavatra simika?
Jereo, izay hita rehetra, anisan'izany ny vatantsika manokana, dia zavatra. Misy ny zavatra voajanahary toy ny biby, zavamaniry, renirano, tany ... dia zavatra forongolo.
Ny zavatra voajanahary dia misy akora maro samihafa. Ary ny zavatra artifisialy dia vita amin'ny akora. Ny akora rehetra dia singa iray na fifangaroan'ny zavatra sasany. Ohatra: Aluminium, plastika, vera, ...
Inona avy ireo fananany?
Ny fananana tsirairay dia samy manana ny toetrany: ny fanjakana na ny endrika (matevina, ranoka, gazy) loko, fofona ary tsiro. Kajy na tsy mety ritra ao anaty rano ... Teboka miempo, teboka mangotraka, hery misintona manokana, fitondra herinaratra sns.
Ary ny fahaizana miova ho zavatra hafa, ohatra, ny fahaizana mamaivay, mihazakazaka ... no fananana simika.
Inona ny atôma?
Ny akora rehetra dia vita amin'ny potika kely sy tsy miandany amin'ny herinaratra antsoina hoe atôma. Misy akora samihafa am-polony tapitrisa, fa karazana atôma 100 mahery.
Ny atoma dia misy atiny miiba miabo tsara ary akorandriaka vita amin'ny elektrôna iray na maromaro voafitaka
Fitoviana malaza indrindra
Fantatra ihany koa amin'ny fanehoan-kevitra momba ny synthesis. Ny karazana fanehoan-kevitra mitambatra matetika dia ny fiasan'ny singa iray misy oksizena hamorona oksida. Amin'ny toe-javatra sasany, ny metaly sy ny metaly dia samy mamaly mora amin'ny oxygen. Raha vao mirehitra, ny magnesium dia mihetsika haingana sy mahery, mihetsika amin'ny oksizenina avy amin'ny rivotra mba hamoronana vovoka manezioma manezioma tsara.
C2H2 + 2CH3CHO → HO(CH3) FIANGONANA (CH3) OH SnCl4 + Sn → 2SnCl2 Cl2 + H2 → 2HCl 2Na + Se → Na2Se 2Kr + O2 → 2CO2 O2 + P2O3 → P2O5 O2 + Se → SeO2 Jereo ny fihetsiky ny fitambarana rehetra
Betsaka ny fanehoan-kevitra momba ny fanapahana no misy hafanana, hazavana na herinaratra hampidirana angovo. Ny fitambaran'ny binary dia fitambarana izay misy singa roa ihany. Ny karazana fanehoan-kevitra tsotra indrindra amin'ny famotehana dia rehefa misy singa mimari-droa mivadika ho singa ao aminy. Ny oxygède Mercury (II), matevina mena, dia lo ka manjary mandrehitra gazy sy gazy oksizenina rehefa mafana. Ary koa, ny fihetsika iray dia raisina ho toy ny fihenan'ny lobolofo na dia iray na maromaro amin'ireo vokatra aza dia mbola mitambatra. Vaky ny karbaona vy amin'ny fananganana gazy vy sy gazy karbonika. Ny kalsiôma karbonat ohatra dia simba ho calcium oxide sy carbon dioxide.
Hg (OH)2 → H2O + HgO 2Al (OH)3 → Al2O3 + 3H2O 2CuO → 2Cu + O2 C4H10 → C2H4 + C2H6 CH4 → C + 2H2 Ag2S → 2Ag + S BaCl2 → Cl2 + Ba Jereo ny fanehoan-kevitra rehetra momba ny lo
Ny fihenan'ny oxidation-reduction (redox) dia karazana fanehoan-kevitra simika izay misy famindrana elektronika eo amin'ny karazany roa. Ny fanehoan-kevitra mihena amin'ny fitrandrahana oksizena dia fihetsika simika izay miova ny isan'ny oksidasian'ny molekiola, atôma, na ion amin'ny alàlan'ny fahaverezan'ny elektrôna. Ny fanehoan-kevitra redox dia mahazatra ary tena ilaina amin'ny sasany amin'ireo asa fototra amin'ny fiainana, ao anatin'izany ny fotosintesis, ny fifohana rivotra, ny fandoroana ary ny harafesina na ny harafesina.
Ag2O + H2O2 → 2Ag + H2O + O2 4HNO3 + Sn → 2H2O + 4 NO2 + SnO2 4KOH + 2MnO2 + O2 → 2 ora2O + 2K2MnO4 12HNO3 + Cu2S → Cu(NO3)2 + 6H2O + 10 NO2 + CuSO4 Zn + FeCl3 → FeCl2 + ZnCl2 CO + 3 Fe2O3 → CO2 + 2 Fe3O4 SO3 + SCl2 → SO2 + SOCl2 Jereo ny fanehoan-kevitra mihena amin'ny fihenan'ny oxygen
Fihetsika fanoloana tokana
A + BC → AC + B Element A dia vy amin'ity fihetsika ankapobeny ity ary manolo ny singa B, vy ao amin'ny fitambarana ihany koa. Raha ny metaly fanoloana dia tsy metaly, dia tsy maintsy soloina ny tsy vy hafa ao anaty fitambarana, ary io no lasa fampitahana ankapobeny. Metaly maro no mora mihetsika amin'ny asidra, ary ny iray amin'ireo vokatra fanehoan-kevitra rehefa manao izany dia ny gazy hidrogen. Ny zinc dia misy fiatraikany amin'ny chloride zinc aqueous sy hidrogen miaraka amin'ny asidra hydrochloride (jereo ny sary etsy ambany).
3Cl2 + 6Fe (TSIA3)2 → 4Fe(NO3)3 + 2FeCl3 Cl2 + C6H5CH3 → HCl + C6H5CH2Cl 2H2O + 2Na → H2 + 2NOHA CH4 + 2Cl2 → C + 4HCl CH3CH2CH2OH + C2H5COOH → H2O + C2H5COOCH2CH2CH3 Br2 + C6H6 → C6H5Br + HBr H2SO4 + Zn → H2 + ZnSO4 Hizaha ny fihetsiky ny fanoloana tokana
AB + CD → AD + CB A sy C dia fiampangana miiba ao amin'ity fanehoan-kevitra ity, fa B sy D kosa dia aniona voapanga ratsy. Ny fanehoan-kevitra fanoloana indroa matetika dia mitranga amin'ny vahaolana aqueous eo anelanelan'ny fitambarana. Mba hiteraka fihetsika iray dia matetika ny iray amin'ireo vokatra ireo dia fantsona mafy, gazy, na fitambaran'ny molekiola toy ny rano. Ny endri-tsoratra iray dia miorina amin'ny valin'ny fanoloana roa sosona rehefa mitambatra ny kôkônika avy amin'ny iray reactant mba hamorona fitambaran'ny ionic tsy mety levona miaraka amin'ireo aiona avy amin'ilay reactant hafa. Ity fanehoan-kevitra manaraka ity dia mitranga rehefa ampifangaroina ireo vahaolana aqueous an'ny potassium iodide sy lead (II) nitrate.
H2SO4 + Na2SO3 → H2O + Na2SO4 + SO2 H2S + Cd (TSIA3)2 → 2HNO3 + CD Cao + H2SO4 → H2O + Raharaha4 2KNO3 + MgCl2 → 2KCl + Mg (TSIA3)2 Al2(N / A4)3 + ZnCl2 → AlCl3 + ZnSO4 3H2SO4 + 2Fe (TSIA3)3 → Fe2(N / A4)3 + 6HNO3 BaCl2 + Raharaha4 → CaCl2 + BaSO4 Jereo ny fanehoan-kevitra fanoloana roa sosona
Jereo ny tranokalanay Diksionera momba ny simika amin'ny fiteny samihafa
Arabo (قام) Bulgarian (рр) Sinoa (Notsotra) (化学 方程式 字典) Sinoa (nentim-paharazana) (化學 方程式 字典) Kroaty (rječnik kemijskih jednadžbi) Czech (slovník chemických rovnic) Danisy (kemisk ligningsordbog) Nerlandey (woordenboek voor chemische vergelijkingen) Finnish (kemiallisten yhtälöiden sanakirja) Frantsay (dictionnaire d'équations chimiques) Alemanina (Wörterbuch für chemische Gleichungen) Grika (λεξικό χημικής εξίσωσης) Hindi (रास) Italiana (dizionario delle equazioni chimiche) Japoney (化学 反 応 式 辞書) Koreana (화학 방정식 사전) Norveziana (kjemisk ligningsordbok) Poloney (słownik równań chemicznych) Portogey (dicionário de equação química) Romainina (dicționar de ecuații chimice)
Rosiana (словарь химических уравнений) Espaniola (diccionario de ecuaciones químicas) Soedoa (kemisk ekvationsordbok) Katalana (diccionari d'equacions químiques) Filipino (fitoviana sy fitoviana amin'ny kemikal) Hebreo (י) Indonezianina (kamus persamaan kimia) Zavatra tsy (ķīmisko vienādojumu vārdnīca) Litoanianina (cheminių lygčių žodynas) Serba (речник хемијских једначина) Slovak (slovník chemických rovníc) Slovenianina (slovar kemijske enačbe) Okrainiana (словник хімічних рівнянь) Albaney (fjalor ary kimika kimik) Estoniana (keemiliste võrrandite sõnastik) Galisiana (dicionario de ecuacións químicas) Hongariana (kémiai egyenlet szótár) Maltese (dizzjunarju tal-ekwazzjoni kimika) Thai (พจพจพจา) Tiorka (kimyasal denklem sözlüğü)
Persanina (فرهنگ ع) Afrikaans (Woordeboek vergelyking chemiese) Malay (kamus persamaan kimia) Swahili (fampiraisana an-tsokosoko sy kemikali) Irlandy (chelicefo cothromóid côtôlôida) Welsh (geiriadur hafaliad cemegol) Belarosiana (слоўнік хімічных ураўненняў) Islandey (efnajöfnuorðabók) Masedoniana (речник за хемиска равенка) Yiddish (כ) Armeniana (քիմիքիմիկ հվվ Azerbaijan (kimyəvi tənlik lüğəti) Basque (ekuazio kimikoen hiztegia) Zeorziana (ქიმიური განტოლების ლექსიკონი) Haole Creole (diksyonè ekwasyon chimik) Urdu (fiteny anglisy) Bengali (রাসায়নিক সমীকরণ অভিধান) Bosnianina (rječnik hemijskih jednadžbi) Cebuano (fampitoviana amin'ny serasera) Esperanto (vortaro pri kemia ekvacio) Gujarati (રાસાયણિક સમીકરણ શબ્દકોશ) Hausa (kamus dinam-pifaneraserana) Hmong (tshuaj lom neeg txhais lus) Igbo (rakibolana simika ọkọwa okwu) Java (kamus persamaan kimia) Kannada (ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣ ನಿಘಂಟು) Khmer (វចនានុក្រម សមីការ គីមី) Lao (ວັດ ຈະ ນາ ນຸ ກົມ ສົມ ຜົນ ທາງ ເຄ ມີ) Latina (rakibolana eget fampitahana) Maori (papakupu whārite Matu) Marathi (रा) Mongoliana (химийн тэгшитгэлийн толь бичиг) Nepali (रा Punjabi (ਰਸਾਇਣਕ ਸਮੀਕਰਨ ਕੋਸ਼) Somali (qaamuuska isle'eg kiimikada) Tamil (வேவேவேய) Telugu (సమీకరణరసాయసమీకరణ) Yoruba (italiana idogba kemikali) Zulu (fampitoviana se-simika isichazamazwi se) Myanmar (Burmese) (ဓာတု ညီမျှခြင်း အဘိဓါန်) Chichewa (fampahalalana mankhwala dikishonale) Kazakh (химиялық теңдеу □ Rakibolana fitoviana simika Malayalam (rakibolana fitoviana mety) Sinhala (රසායනික සමීකරණ ශබ්ද කෝෂය) Sesotho (lik'hemik'hale ea equation ea lik'hemik'hale) Sodaney (kamus persamaan kimia) Tajik (л Uzbek (kimyoviy tenglama lug'ati) Amharic (የኬሚካል እኩልታ መዝገበ-ቃላት) Corsican (dizziunariu d'equazioni chimichi) Hawaiianina Kurdi (Kurmanji) (ferhenga hevkêşeya kîmyewî) Kyrgyz (химиялык теңдемелер сөздүгү) Luxembourgish (chemesche Gleichwörterbuch) Pashto (دکمما ع) Samoanina Gaelika Scottish (faclair co-aontar ceimigeach) Shona (fitoviana kemikari duramazwi) Sindhi (ڪيميائي سا) Frisian (Gemysk fergeliking wurdboek) Xhosa (rakibolana fampitahana imichiza)